Momba anay - Xuzhou Kanfur Electronic Technology Co., Ltd.
Niorina tamin'ny volana martsa 2012, Xuzhou Kanfur Electronic Technology Co., Ltd. dia orinasa ha-tech maoderina manambatra ny R & D, ny endrika, ny fanavaozana, ny famokarana ary ny varotra, miorina ao amin'ny China Mining University Science Park any Xuzhou. Tamin'ny fiantombohan'ny orinasam-pananganana ny orinasa, ny fitaovana fitsaboana, ny famerenana amin'ny laoniny ary ny vokatra ara-pahasalamana ho andalana lehibe amin'ny fampandrosoana ny orinasa.
Amin'izao fotoana izao, ny orinasa dia manana ekipa R & D matihanina sy miorina, miaraka amin'ny teknolojia fototra R & D mahaleo tena sy ny haitao mandroso sy ny fikarakarana, ary ny ekipa R&D dia manana fanavaozana matanjaka sy tanjaka fikarohana ara-tsiansa, ny vokatra rehetra amidinay dia mahaleo tena novolavolain'ny ekipan'ny R&D anay ary manana zon'olombelona miankina tanteraka.
Ny orinasa dia tsy vitan'ny hoe nahazo ny voninahitra "orinasa siantifika sy teknolojia kely sy salantsalany", fa nandalo ihany koa ny "Certification System Management System Certification", ny vokatra avy amin'ny orinasa dia nandalo ihany koa ny fanamarinana CE Union EU, fanamarinana FCC, fanamarinana ISET. Amin'izao fotoana izao, ny orinasa dia manana sokajy marobe mihoatra ny 20 karazana vokatra eny an-tsena, izay manana disinfection sy sterilization asa ny vokatra lehibe dia ultraviolet sterilization jiro, tontolo iainana detection fitaovana manana formaldehyde detection fitaovana, intravenous developer, sauna efitrano fifehezana. Ny orinasa koa dia miankina amin'ny R & D azy manokana, ny famokarana ary ny tombony ara-indostrialy hafa, ho an'i Eoropa, Amerika Avaratra, Azia atsimo ary ny tsena hafa hanome vokatra, nahazo ny fahatokisan'ny mpampiasa.
Tontolo iainan'ny orinasa
Ny orinasanay koa dia manana fahaiza-manao fanaraha-maso kalitaon'ny vokatra siantifika sy henjana, fitaovana fanaraha-maso kalitao maoderina sy rafitra fitiliana henjana ary fiantohana ny kalitaon'ny vokatra ao amin'ny orinasa. Miankina amin'ny kalitao tena tsara ny vokatra avy amin'ny orinasa, mitombo hatrany ny fizarana tsena, ary mitombo hatrany ny varotra. Ny orinasa dia nivoatra ho orinasa manavao teknolojia manana toetra miavaka maoderina. Ny orinasanay dia mifikitra hatrany amin'ny filozofia fampandrosoana ny "teknolojia aloha, ny kalitao aloha", mampihatra ny fitantanana orinasa maoderina sy mahomby ary manolo-tena ho lasa mari-pahaizana indostrialy anatiny. Nandritra ny fotoana lava be, ny orinasa dia nanolo-tena hanavao ny manodidina ny filan'ny mpanjifa, ny fiaraha-miasa amin'ny mpiara-miasa misokatra, manolo-tena amin'ny fanomezana vahaolana, vokatra ary serivisy sy rafitra ary manao izay fara heriny hamoronana ny soatoavina lehibe indrindra ho an'ny mpanjifa. Amin'ity vanim-potoana fanavaozana teknolojia vaovao feno fanararaotana, fanamby ary fifaninanana ity dia hohatsaraina ny fampandrosoana ny orinasa. Hanohy hanatsara ny rafitra fitantanana izahay, hampitombo ny fampidirana mpiasa siantifika sy teknolojia, ny fikarohana sy ny fampandrosoana ny vokatra vaovao ary ny fampandrosoana ny tsena, hanomezana fanampiana matanjaka ho an'ny fampandrosoana maharitra sy haingana an'ny orinasa. Hifantoka amin'ny tsena ny orinasa, hampiroborobo ny fampandrosoana ny orinasa amin'ny fanavaozana ny teknolojia, ary hiezaka hamela ny orinasa handray anjara betsaka amin'ny sehatry ny fitsaboana, ny fanarenana ary ny tsenan'ny fahasalamana.
Miaraka amin'ny haitao famokarana tsara sy fanaraha-maso kalitao henjana. Isaky ny puce, circuit board na ampahany, ny Fampiononana dia afaka mifehy tanteraka ny fizotrany rehetra avy amin'ny fitehirizana hampiasaina hiantohana ny kalitaon'ny vokatra azo antoka. Ankoatr'izay, ny fanaraha-maso kalitao alohan'ny handaozana ny orinasa no antoka tsara indrindra ho an'ny kalitao avo lenta.